कहाँ छन् साँढे ३३ किलो सुन तस्करीका ठूला माछा ? | Kendrabindu Nepal Online News
कहाँ छन् साँढे ३३ किलो सुन तस्करीका ठूला माछा ?
१३ श्रावण २०७५, आईतवार ०७:०४
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत जेठ २३ मा सार्वजनिक रूपमै सुन तस्करका तीन तहका गिरोह केलाएका थिए । सुन तस्करीमा भुरा, मझौला र ठूला माछा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थापालाई सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ‘ठूला माछा’ बिनै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
साँढे ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरणबारे छानबिन गर्न गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष चैतमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै यसै साता मन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।
चार महिना लामो अनुसन्धानका क्रममा मुख्य आरोपी भनिएका गोरे नामले चिनिने चूडामणि उप्रेती सहित समितिकै सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ६३ जना माथि मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा चलाइएका र त्यस बाहेक गरी ४५ जना पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू सबै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार राजनीतिक दलका केही नेता र यस अघि सुन व्यापारमै कहलिएका व्यापारीको नाम खुले पनि थप प्रमाण नभएपछि उनीहरूलाई शंकाको घेरामा राख्ने काम भएको छ । समितिले झण्डै तीन सय जनाको नाम यस्तो शंकाको घेरामा राखेर प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
Prevनिर्माणाधिन मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको काम सकियो
एमआरपी अब ई–पासपोर्टमा रुपान्तरण हुनेNext
गोरेले बयानमा कसलाई पोले, कसलाई जोगाए ?
साँढे ३३ किलो सुन तस्करी : विश्वास गरेकाले नै फेरे बयान
नेपाली बजारमा दैनिक ५ केजी अवैध सुनको कारोबार हुँदै